Dhageyso Amisom Iyo Askarta “DF” oo Dil, Dhac Iyo Kufsi Ka Geystay Tuulada Gaaywarrow Ee Sh/Hoose. – Shabakadda Amiirnuur
Dhageyso Amisom Iyo Askarta “DF” oo Dil, Dhac Iyo Kufsi Ka Geystay Tuulada Gaaywarrow Ee Sh/Hoose.
August 8, 2018 6:40 am by admin Views: 49
Askarta Uganda ee qeybta ka ah shisheeyaha “Amisom” iyo kuwa “DF” ayaa maalintii shalay dhibaatooyin aad u xanuun badan ka geystay tuulada Gaaywarrow, oo qiyaastii 5KM, u jirta degmada Qoryooley ee gobolka Sh/hoose.
Tuuladan oo ay deggan yihiin beeraley iyo xoolo dhaqato ayaa ka hor inta aysan qabsan waxay ku garaaceen madaafiicda “BM” kadibna gudaha ayay u galeen halkaasoo ay ku dhibaateeyeen dadkii duqeymahooda ka carari kari waayay ee waayeellada, caruurta iyo haweenka ahaa.
Inta la hubo waxay dileen hal qof, toban kalana waa ay dhaawaceen. Balse arrinta kale ee xanuunka leh ayaa waxay tahay in ay kufsi wadareed u geysteen Haweeney xaamilo ahayd, taasoo xaaladeeda laga deyrinayo.
“Gabarta waxaa kufsaday afar ka tirsan ciidamada dowladda, mid shanaadna qori ayuu ku waardiyeynayay kuwa kufsiga geysanayaayay” sidaas waxaa inoo sheegay mid kamid ah dadka degaanka.
Sidoo kale ciidamada Uganda, iyo kuwa dowladda ayaa dhac u geystay goobo ganacsi iyagoo ka qaatay lacago iyo telefoonada gacanta, kadibna waxay dib ugu laabteen fariisimihii ay kasoo duuleen oo aad ugu dhow degaanka.
Xalay sagaalkii fiidnimo ayaa la aasay qofkii ay dileen oo ahaa wiil 14 jir ah, iyadoo dadkii dhaawaca ahaa loo sameeyay gargaarka degdegga ah kuwaasoo lagu wado in maanta loo qaado isbitaalo waaweyn.
Askarta dowladda iyo kuwa Amisom, ayaa dhibaatadan geysanaya iyagoo uu dagaal ku socdo oo meelo badan lagu go’doomiyay, waxaana la is weydiin karayaa, wixii dhici lahaa haddii ay dalka oo dhan qabsan lahaayeen?
Dhageyso Dadka Tuulada Gaaywarrow